Ethiopia, Rwanda uye Uganda: Top 10 nani nyika pakufamba dzokugara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Ethiopia, Rwanda uye Uganda: Top 10 nani nyika pakufamba dzokugara
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Ethiopia Kupwanya Nhau • nhau • Vadivelu Comedy Rwanda Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Uganda Breaking News
Tatu Eastern Africa nyika dzakabuda pakati penzvimbo gumi dzirikurumidza kukura nzvimbo dzekushanya munyika.
Ripoti ra2019 rakaunganidzwa neWorld Travel and Tourism Council (WTTC) rinoratidza kuti Ethiopia ndiyo nzvimbo inokura nekukurumidza kupfuura dzimwe nyika neRwanda iri panzvimbo yechitanhatu uye Uganda yakabata chinzvimbo chegumi nemaviri pachinyorwa ichi.
Chikamu cheEthiopia chekushanya chakakura neinoshamisa 48.6 muzana mu2018, ichiita 9.4 muzana yehupfumi uye ichigadzira mabasa mamirioni 2.2. Vanopfuura 8 muzana yevashandi veEthiopia vese vava kushanda mukushanya.
Rwanda yakaonawo kukura kwe13.8 muzana uye Uganda 11.3 muzana, neese matatu achiratidza kukwezva kweEast Africa zvese maererano nemhuka dzesango, nhoroondo, nemabhishi, Nation Media Group yakashuma kubva kuNairobi.
Kenya yakaonawo kukura kukuru mu2018 pa5.6 muzana iyo yainge yagadzira 1.46 mamirioni emabasa uye yakaita 8.8 muzana yehupfumi hwegore rose.
Kenya inomira senzvimbo inotungamira yekushanya muEastern Africa, ichitora mukana wehupenyu hwayo hwesango, nzvimbo dzezvakaitika kare, uye mahombekombe pamahombekombe eIndian Ocean uye nekuvandudza mabasa evashanyi, kunyanya mahotera nenzvimbo dzekutakura nendege.
Mukuwongorora kwayo kwegore negore kuchitsanangudza hupfumi hwepasirese nemabasa mukufamba nekushanyirwa munyika zana nemakumi maviri neshanu, tsvagiridzo yeWorld Travel uye Tourism Council inoratidza kuti chikamu ichi chakaita 185 muzana yeGDP yepasi rose nemabasa emamiriyoni 25, kana gumi muzana basa mu10.4.
Inowedzera kuti kukura uye kushanya kwekukura muna 2019 kunotarisirwa "kuramba wakashinga" kunyangwe hupfumi hwepasi rose hwakadzikira.
"Kufungidzira kwedu kunongedzera ku 3.6 muzana yekuwedzera kwekufamba uye kushanya, nekukurumidza kupfuura kutarisirwa kweupfumi hwepasi rose kukura kwe2.9 muzana mu2019," akadaro mushumo.
Inowedzera kuti rimwechete pamashanu emabasa ese matsva akagadzirwa nekufamba uye kushanya mukati memakore mashanu apfuura zvichiratidza kukosha kuri kukura kwechikamu kune hupfumi hwenyika.
Yekufamba uye yekushanya GDP yakakura ne5.6 muzana mu2018, zvakanyanya pamusoro peAfrican hupfumi hwekukura huwandu hwe3.2 muzana
Izvi zvinoisa Africa senzvimbo yechipiri inokura nekukurumidza mu2018, kumashure kweAsia-Pacific chete.
Kukura kwakadaro kunotsanangurwa nechikamu chekuchamhembe kweAfrica kubva kumatambudziko ezvekuchengetedza pamwe nekuvandudzwa uye kuitwa kwemitemo inokurudzira kusimudzira kwekufamba.